သင်၏ Domain အမည်များကိုမည်သို့ရောင်းရမည်နည်း Martech Zone
စနေနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 24, 2016 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 28, 2016 Douglas Karr
သင်သာကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ဖြစ်ပါကသင်သည်ထိုဒိုမိန်းအမည်မှတ်ပုံတင်ကြေးကိုလစဉ်လတိုင်းဆက်ပြီးပေးဆောင်နေပြီးသင်၎င်းကိုအသုံးပြုတော့မည်လားသို့မဟုတ်ဝယ်ရန်ဝယ်သူကသင့်ကိုဆက်သွယ်မည့်သူရှိမရှိသိလိုသည်။ ပြwithနာစုံတွဲတစ်တွဲရှိတယ်။ ပထမ ဦး စွာမဟုတ်ပါ။ သင်ကအသုံးပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနောက်တာမရပ်တော့ပါနှင့်၊ ၎င်းသည်သင့်ကိုနှစ်စဉ်ပိုက်ဆံတစ်စုံတစ်ရာကုန်ကျစေသည်၊ ဒုတိယအနေနဲ့ဘယ်သူကသင်အမှန်တကယ်ရောင်းနေတာကိုဘယ်သူမှမသိဘူး၊ ဒါဆိုသင်ဘယ်လိုကမ်းလှမ်းမှုတွေရတော့မှာလဲ။
လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကဒိုမိန်းကို Whois ရှာဖွေရန်၊ မည်သူပိုင်သည်ကိုခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်၊ ကမ်းလှမ်းမှုများနှင့်တန်ပြန်ကမ်းလှမ်းမှုများအကကိုစတင်ရန်ဖြစ်သည်။ သင်စျေးနှုန်းကိုသဘောတူလိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သင်သည်ငွေသွင်းအကောင့်တစ်ခုကိုဖွင့်ရသည်။ ၎င်းသည်ဒိုမိန်းအားစနစ်တကျလွှဲပြောင်းပေးမှုကိုသေချာစေရန်ငွေကိုကိုင်ထားသည့်တတိယပါတီဖြစ်သည်။ ဘယ်အချိန်မှာငွေသွင်းအကောင့်ကငွေကိုရောင်းသူကိုရောင်းပေးတယ်။
အခုအများကြီးပိုလွယ်ပါတယ် တူသောဝန်ဆောင်မှုကိုအသုံးပြုသည် ဒိုမိန်းကိုယ်စားလှယ်များသင်သည်သင်၏ဒိုမိန်းများအားလုံးကိုသူတို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုတွင်စာရင်းပြုစုနိုင်သည်။ သူတို့ဟာရောင်း ၀ ယ်မှုအတွက်အတော်အသင့်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကရှာဖွေရေးစျေးကွက်တစ်ခု၊ ထုံးစံအတိုင်းဆင်းသက်လာသောစာမျက်နှာနှင့်အကောင့်အကောင့်အားလုံးကိုပလက်ဖောင်းတစ်ခုအောက်မှာပေါင်းစပ်ထားပါတယ်။ ၎င်းသည်သင်၏ဒိုမိန်းကိုရှာ။ ရောင်းရန်လွယ်ကူစေသည်။
မင်းဘာစောင့်နေတာလဲ? အသုံးမပြုတဲ့ (နှင့်အသုံးများသောသူများကို) ယခုထည့်ပါ။
သင်၏ Domain ၏စျေးနှုန်းကိုသင်မည်သို့သတ်မှတ်မည်နည်း။
ငါဒါအတော်လေးလုပ်ခဲ့တာကြာပြီ။ ဒါကခက်ခဲတဲ့မေးခွန်းပါ။ ရောင်းသူတစ် ဦး က၎င်းသည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုသို့မဟုတ်ချမ်းသာသော ၀ ယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းသိမြင်နိုင်သည်။ ဒါမှမဟုတ်ရောင်းသူတစ် ဦး ဟာစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးကြီးစွာသောဒိုမိန်းအမည်ကိုဘာမှမလုပ်နိုင်တော့ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဒိုမိန်းအမည်များစွာကို ၀ ယ်ပြီးရောင်းလိုက်ပြီး၎င်းသည်အမြဲတမ်းစိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေဖြစ်သည်။ dash များသို့မဟုတ်နံပါတ်များကိုမကြာခဏစိတ်ကူးယဉ်တတ်သည့် domain တိုများကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောစည်းမျဉ်းအချို့ရှိသည်။ စာလုံးပေါင်းမှားသောစကားလုံးများပါသောရှည်လျားသောဒိုမိန်းအမည်များသည်လည်းမလုံလောက်ပါ။
အဆိုပါ TLD .com ရှာဖွေခြင်း (သို့) browser အတွင်းမှဆိုဒ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးအကြိမ်ရှာဖွေခြင်းသည်ယခုထက် ပို၍ တန်ဖိုးရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဒိုမိန်းတွင်အမှန်တကယ်ပါ ၀ င်ပြီးရှာဖွေခြင်းရလဒ်များကို (malware သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းမရှိပဲ) မောင်းနှင်ခဲ့ပါက၎င်းသည်၎င်းတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အတွက်နောက်ထပ်အော်ဂဲနစ်အသွားအလာသို့မဟုတ်အခွင့်အာဏာကိုမောင်းနှင်ရန်ကြိုးစားသည့်ကုမ္ပဏီအတွက်ပင်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ညှိနှိုင်းမှုတွင်ရိုးသားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ၀ ယ်သူသည်အရောင်းအ ၀ ယ်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုရှိမရှိချက်ချင်းတုန့်ပြန်မှုပြုရန် ၀ ယ်သူအားပထမဆုံးအကြိမ်လေလံဆွဲရန်အမြဲတမ်းအကြံပေးသည်။ ၀ ယ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်တတိယပါတီကိုယ်စား ၀ ယ်နေကြောင်းထုတ်ဖော်လိမ့်မည်၊ အကြောင်းမှာသူတို့သည်စျေးသိပ်မပေးဘဲမျှတသောစျေးနှုန်းကိုပေးလိုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရောင်းချသူကိုပြန်လည်မနှုတ်ဘဲဒိုမိန်းတန်ဖိုးရှိရာကိုပေးလိုကြောင်းကိုလည်းရောင်းချသူအားအသိပေးသည်။ စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုအပြီးတွင်နှစ်ဖက်စလုံးသည်များသောအားဖြင့်ပျော်ရွှင်ကြသည်။
to Bakc ဒိုမိန်းကိုယ်စားလှယ်များ။ ကျွန်ုပ်၏ဒိုမိန်းအမည်အတွက် DNS ကိုပြုပြင်ခြင်းအားဖြင့်ဒိုမိန်းကို ၀ ယ်ရန်လွယ်ကူစေရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဆင်းသက်မှုစာမျက်နှာကိုတင်သည်။ ဒီမှာဥပမာကောင်းတစ်ခုပြပါမယ်။ addressfix.com.
ဤတွင်ကျွန်ုပ်တို့ရောင်းရန်တင်ထားသည့်အခြားဒိုမိန်းများဖြစ်သည်။ အချို့သည်ကောင်းမွန်ပြီးတိုသည်။ အချို့မှာအတော်အတန်ရေပန်းစားသည် (အနည်းဆုံးလေလံများမှာသိသာသည်) ။
ထုတ်ဖော်: ငါတို့အဘို့အကျွန်တော်တို့ရဲ့ Affiliate လင့်များကိုအသုံးပြုနေသည် ဒိုမိန်းကိုယ်စားလှယ်များ ဒီ post တလျှောက်လုံး
Tags: ဒိုမိန်းရောင်းချခြင်းဒိုမိန်းသင်၏ဒိုမိန်းအမည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသနည်းဒိုမိန်းအမည်ကိုဈေးနှုန်းသတ်မှတ်နည်းdomain name တစ်ခုဘယ်လိုရောင်းရမလဲဒိုမိန်းရောင်းdomains များရောင်းtld
Computech နည်းပညာ ၀ န်ဆောင်မှုများ
29:2016 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 56 တွင်
အလွန်ကြီးစွာသောအကြံဥာဏ်နှင့်အတူအလွန်ကောင်းတဲ့ post ကို။ နှစ်စဉ် reg အခကြေးငွေထပ်ခါတလဲလဲပေးရတာထက်ဒီအသုံးမပြုတဲ့ domains များကိုစွန့်ပစ်ခြင်းသည်ကုန်ကျစရိတ်ပိုမိုသက်သာသည်။